DULIN ABAAREED: Cabdijibaar Aaden Gaas – Radio Daljir
DULIN ABAAREED: Cabdijibaar Aaden Gaas
Abriil 12, 2017 9:18 g 0
Guud ahaan dalka abaar adag iyo seben baa ka dhacay mana aha wax aad qiimaynkarto ama wax laga sheegi karo gaar ahaan nugaal iyo hawd intii aan u ahay xog ogaal gobolada sool sanaag togdheer iyo nugaal.
Gebi ahaan waxaa dabar go’ay oo xaadhmay duunyadii ay dadku ku noolaayeen. Ma jirto tallaabo aad qaaddaa oo aadan ka tilaabsan bakhtiga iyo qalfoofka xooleheenii shanta meesi geel iyo adhi ha ugu badnaadeene. Waxa iyagu mar hore dabar go’ay oo ay yartahay in aad aragto gamaankii joogay caankana ay ku ahayd dooxada nugaal iyo dhamaan ceelasha aanay biyuhu ka go’in seben kasta oo adkaada.
Durdurradii Nugaaleed ayaad ku arkaysaa xawayaano aan dad la joog ahayn oo ka cabaya iyaga oo aan haba yaraatee haab iska saarayn dad iyo duunyo si ka duwan sidii ay u dhaqmijireen iyagoo la cabaya xoolaha. Darka uu qofka xoolaha waraabsanayaa biyaha ku shubo isku soo miidaaminaya
taasoo ku tusaysa inay abaartani is badday duunyo iyo dugaag dhuuni ka dhiganjiray xoolaha.
Marka aad kiilomitir iyo badh u soo jirto tuulooyinka ceelasha iyo dhammaan halkii qoys degenaa ayaa waxaa ku saaqaya urta bakhtiga sida duddada u rasaysan jeexyada ay duunyadu ku dhaqnayd kolka aad dhex marayso keliya laydha ku qaadaysaa waa mid xanbaarsan urta xoolaha ay abaartu salfatay
Banankii geela, idaha iyo farduhu ay fadhiyi jireen ayaad ku arkaysaa wax bidhaana saanta lafaha qalfoofka gorofsan sida tarabtarabka ah u yaal. Maaha keliya waxa dhintay xoolihii ee waxa si joogto ah u dhinta dadka haba u badnaadeen caruurta iyo dumarka nafaqo la’aanta iyo macaluul ay weheliyaan xanuunno.
Maaha tani mid mar walba loo sheego sida ay tahay. Intii aan ku sugnaa gobolka Sool ayaan la kulmay kiisas caddaymo u ah in ay dhimashada dadku socotay 3 dii bilood maadaama ay adagtahay xaaladdu ayaa waxa ay ka baxsantahay awooddii isku tiirsanaantii qoys ahaan haddii ay tahay mid dibad jira iyo mid dal joogaba oo dadka wax tarijiray.
Kiiska dhimashada dadka ayaa ah mid joogto ah waxaa adag qoyskii uu qof ka dhintaa in ay u sheegaan wiilkoodii dhintay ama gabadhoodii dhimatay gaajo nafaqo darro iyo macaluul u dhintay maadaama ay yihiin dadku Soomaali xoolo dhaqata ayay ku daayaan keliya in uu hebel dhintay. Waxa ka reebban in uu qofku baahidiisa u sheegto dad aan ahayn ehelkiisa iyo tolkii lana ogaado baahidiisa halka dadyawga qaar sida galbeedka iyo koonfur galbeed uu qofka sidan oo kale ahi baahidiisa la dhex maro dadka waxna waydiisto taasina waa mid ay ka caaganyihiin tani waxay noqotay mid aan la is waydiin dhimashada iyo sababteeda ee kii dhintana godka la galiyo kii bukaan jiif ahna lagu soo booqdo kolka ay naftu dhaafto.
Iyada oo ay jiraan duruufahaa nololeed ayaa waxa weheliya mid amni darro ha ahaato colaado beeleedyo kuwo siyaasado is diidan dhamaanntoodna aan haba yaraatee wax u jeeddo ah oo ay isku diiddanyihiin jirin ayaa dhibicdii dhulka u dhacdaba waxa ka hoos dhacaya dhiig iyo is uur dooxad aan lahayn wax sababa oo kan la dilay loo dilay, kan wax dilayna uu u dilay.
dhanka gargaarka abaaraha ayaa waxa yar deeqaha soo gaadha gobolka haddii ay jiraanba waxa hadheeyay musuq gaamuray oo ay ka raalli yihiin dhinacyada ku soo isma wax faro guudkooda iyagoo ku lugooya dadka baahan goobaha lagu ururiyay caydha ay xoolihii ka madheen kalana soo cararay caruurtooda diihaalka gaajada iyo harraadka ka dhacay dhulkan ay dhibicdii ka raagtay iyaga oo yoxooba ceelasha dushooda halkaana ay ku garaacayso dabaysha kululi ayaa waxaad arkaysaa caawimooyinkii iyo gaadiidkii siday iyo gawaadhida raaxada ee loo yaqaan laangaruusalka oo daba jooga ayna saaranyihiin mas’uuliyiin xilal maamul haya oo tuban kaymaha u dhaw jidka lana fadhataysanayo loona kala weecinayo magaalooyinka waawayn ee lagaga iibsanayo iyagoo maalinkii oo dhan ku jira kaynta habeenimona u soo baxaya meelo aan loogu talo gelin.
Ma aha tani mid uu fali karo inna noole u ah dadkan sokeeye ama uu diirnaxaa ugu yaal iskaba daaye damiir aadane leh waana mid aniga ii ah su’aal taagan aanan u na hayn wax jawaaba oo iga ga filnaada oo aan ka ahayn in ay jiraan aafooyin is huwan badidoodana aan xal loo waayin balse loogu talo galay.
Qormooyinka Daljir 46 Wararka 17733
Laamaha Ammaanka Gobolka Karkaar oo Danbiilayaal soo Xirxiray